Full Tusaha Maareynta Google Xiriir
Haddii ay jirto wax uu caddeeyay in uu Tilmaamay ah oo ka mid ah barnaamijyadooda Google, waa Google Xiriirada, nidaamka super hufan oo firfircoon buug cinwaanka. Hadda, codsiga internetka ah, Google Xiriirada lahaa kuwa is-hoosaysiiya bilowga sida qayb ka mid ah Gmail, oo kuu ogolaanaya in aad ku darto, tirtirto, xaalkaa, iyo guraan aad xiriirka la leedahay.
Liisaska ayaa xiriir in aad la abuuro isticmaalaya Google Xiriirada u hagaagsan karaa qalabka aad mobile si fudud, waxaa telefoonka iPhone ama Android noqon. Waxaad kaliya si loo xaqiijiyo in aad si sax ah u qotomiyey. Maanta, waxaan fiirin doonaa sida aad u maamuli lahayd Google Xiriirada, iyo abaabulo liiska weyn aad.
1. Waa maxay Groups Contact iyo Circles
2. Samee New Groups iyo xilsaar Dadka si ay u Groups
3. Sidee inay la midowdo nuqul Xiriir
4. Sida loo soo dejinta iyo dhoofinta Xiriir
5. nidaameed Google Xiriirada la Android
6. nidaameed Google Xiriirada la macruufka
Waa maxay Groups Contact iyo Circles
Haddii aad tahay sida dadka badankiisu waxaa isticmaala Gmail, ka dibna waxa ay ku xidhan tahay in aad qabto liiska xiriirada aad u ballaaran ah, in lagu kaydiyaa gudahood menu default loo yaqaan 'Xiriirada All' ka. Sababta sababta liiskan waa weyn waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in uu ka kooban yahay email ah ee qof kasta oo aad abid saxafadeed, ayaa ku jawaabay in, ama loo yaqaan ama Galiani oo isticmaalaya Google Voice. Waxaa sidoo kale ku jira macluumaad loogu talagalay dhamaan dadka u soo aad xiriiray Google Chat.
Nasiib wanaag, Google ayaa la siiyaa feature wax ku ool ah ee darajo aad xiriirka la leedahay oo dhan. Oo waxaad iyaga u abaabuli karaa in kooxo gaar ah oo gaar ah xubnaha qoyska, saaxiibo, shaqaalaha, asxaabta, iyo ganacsi iwm, taas oo ka dhigi doonta in ay u fududahay in aad u hesho la xiriir gaar ah mar kasta oo aad u baahan tahay, la isticmaalayo qasabno yar.
Kooxaha - Waa arrin aad u fudud in la abuuro Groups on Google Xiriirada, oo kulli wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay raacaan -https li_x_nk ah: //contacts.google.com, iyo login la Gmail ku tiriya in aad rabto in aad isticmaasho. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad gasho, tag qaybta menu on dhinaca bidix ee shaashadda ah, guji "Groups", ka dibna ikhtiyaarka ah 'kooxda New' in la abuuro koox aad rabto.
Goobaha - Circles ayaa dhanka kale lala Google+ profile oo ku jiri doona xiriirrada qof kasta oo ku jira Google+ profile wareegyada. Halkan waxa kale oo, Google waxay bixisaa fursad u darajo aad xiriirka la leedahay, oo ka duwan Groups, waxaa bixiya qaybaha horena sida saaxiibada, qoyska, isbarteen, Ka dib, iyo Work by default. In kastoo, waxaad sidoo kale abuuri kara wareegyada kuu gaar ah ee aad u baahan tahay.
Samee New Groups iyo xilsaar Dadka si ay u Groups
MAARAYNTA Google Xiriirada, waxaan doonaa ugu horayn la diiradda Groups. Sidaas, aynu eegno deg deg ah sida aad u abuuri karaan koox cusub oo u yeelaan xiriir iyaga.
Talaabada 1: Tag https://contacts.google.com iyo login la faahfaahinta xisaabtaada Gmail.
Talaabada 2: Marka, in qortey, waa in aad aragto shaashadda ah sida ku cad image hoose.
Tallaabo 3: U tag ah tab 'Groups', la siiyo dhinaca bidix ee shaashadda, guji ikhtiyaarka ah 'kooxda New'. Tani waa in la furo dariishadaha gujisid ku waydiinaya inaad magacaabo koox cusub ee aad rabto in la abuuro. Tusaale ahaan tan, waxaan la abuuro koox la odhan jiray 'Work' xiriirada ganacsiga aan, ka dibna ku dhufatey 'Abuur group' button.
Talaabada 4: Hadda, mar koox cusub loo abuuray, tusi doonaa shaashadda iyada oo aan la xiriiro sidii ay u aan weli ku daray. Si aad ku dari xiriir ah, waa in aad riix 'Ku dar qof' icon, siiyo dhinaca hoose gacantiisa midig, ka eeg shaashadda hoose.
Talaabada 5: Marka gujinaya ah 'Ku dar qof' icon, waxaad ka heli doontaa gujisid kale aad ka fudud nooca kartaa magaca xiriir iyo iyagoo aad ku dartid kooxdan.
Talaabada 6: Si fudud u dooro xiriir gaar ah oo aad rabto inaad ku darto iyo Google Contact si toos ah dari doonaa qofka koox aad dhawaan la abuuray.
Sidee inay la midowdo nuqul Xiriir
Biirtay xiriirada nuqul gudahood kooxaha waa mid aad u fudud oo la samayn karaa in tallaabooyin fudud yar sida hoos ku siiyo.
Talaabada 1: Dooro xiriirrada nuqul sax ku sameeyo sanduuqa dhinaca bidix ee xiriir kasta.
Talaabada 2: Hadda, ka soo qaado gacantii midig qaybta kooxda ugu sareysa ee shaashadda, guji "midowdo 'icon ama doorasho.
Talaabada 3: hadda waa in aad qaadataa xaqiijinta leh 'xiriirada ayaa la biireen.' sida ku cad shaashadda hoose.
Sida loo soo dejinta iyo dhoofinta Xiriir
Feature dhoofinta waa xal u fiican haddii aad rabto inaad waqti ka lumin maadaama oo aan la tirtiro Entries aan loo baahnayn in kooxaha oo dhan gacanta. Si loo isticmaalo, raac tallaabooyinka sida hoos ku siiyo.
Talaabada 1: Laga soo bilaabo kooxda reer menu gacanta bidix ku saabsan Google Xiriirada screen, dooro ikhtiyaarka ah ee 'More'.
Talaabada 2: Hadda, ka menu dropdown ah, dooro ikhtiyaarka ah ee 'dhoofinta'.
Talaabada 3: Haddii aad isticmaalayso version Kulanka Xiisaha Leh ee Google Xiriirada ah, waxaad ka heli kartaa gujisid aad kula taliyay in ay tagaan ee Google Xiriirada jir ah oo ka dibna la dhoofiyo. Sidaas, si fudud guji tag XIDHIIDH HORE '.
Talaabada 4: Hadda, u tag ikhtiyaarka More> dhoofinta sida ku cad shaashadda hoose.
Talaabada 5: Markaas, furmo popup ah, dooro 'xiriirada All' iyo 'Google CSV qaab' sida fursadaha, ka hor inta garaacid badhanka 'dhoofinta'.
Nidaameed Google Xiriirada la Android
Talaabada 1: riix badhanka Menu ku qalab Android aad ka dibna tag Settings.
Talaabada 2: Dooro ikhtiyaarka ah Accounts> Google , ka dibna fiiri sanduuq ka dhanka ah 'xidhiidh'.
Talaabada 3: Hadda, u tag button Menu iyo doorto ikhtiyaarka 'nidaameed Hadda' si hagaagsan iyo dari oo dhan Google Xiriirada qalab Android aad.
Nidaameed Google Xiriirada la macruufka
Talaabada 1: Tag app Settings ee ku saabsan qalabka macruufka.
Talaabada 2: Dooro Mail, Xiriirada, Kalandarada .
Talaabada 3: Markaas, dooro dar xisaabta .
Talaabada 4: Dooro Google .
Talaabada 5: Buuxi macluumaadka sida loo baahan yahay - Magaca, User Name, Password, Desc_x_ription, ka dibna tubbada Next button on geeska gacantiisa midig sare ee shaashadda.
Talaabada 6: On shaashadda soo socda, si loo hubiyo in ay Xiriir doorasho u rogmatay ON, ka dibna tubbada Save dhinaca gacanta midigta sare ee shaashadda.
Hadda, kulli wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa si loo bilaabo Xiriirada app ku saabsan qalabka macruufka, iyo syncing ee Google Xiriirada si toos ah u bilaabi doonaan.
Guud ahaan, waxaan rajaynaynaa in hagahan kaa caawin doona inaad samayso faa'iidada ugu badan ee Google Xiriirada siyaabaha fudud oo si sahlan kor lagu soo sharxay.
Saddex siyaabood oo wax loo akhriyo fariimaha qoraalka ah online
Liiska Wedding - Timeline Wedding Qorsheynta Wedding Eebaha
Hel Back to The Old Profile Facebook - Disable Facebook Timeline?
Sida loo dar Muqaal ah in Joomla Qodobka
Share Flash Muqaal Online - Muqaal u Blogger
> Resource > Talooyin > Full Tusaha Maareynta Google Xiriir